Warshadda Baakadka Baakadka ee Waraaqaha Shiinaha iyo soosaarayaasha | Fangda
Waraaqaha Liiska Xidhmada ee waraaqaha ayaa kuu oggolaanaya inaad si fudud dukumintiga ula wadaagto macaamiishaada adigoon ka welwelin inuu burburo ama la tuuro.
Cabir: 240 × 180 mm
Waxyaabaha: Paper Transparent
Dhumucdiisuna: 25gsm + 40gsm
Midabka: Cagaar iyo madow ama la qaabeeyey
Daabac: DOCUMENTOS / LIISKA XIRIIRKA / Daabacaadda qaabeynta
Koollo: koollo dhalaal kulul oo tayo sare leh (Patented)
Safka: warqad cad oo kraft ah
* Dukumintiga FANGDA ee ku lifaaqan baqshaddu waxay ka kooban yihiin warqad hufan, kuma jiraan walax khatar ah, 100% wax soo saarka cagaaran oo baaba'aya
* Badeecadaha u habboon deegaanka oo si ballaaran loogu adeegsado maraakiibta iyo warshadaha saadka.
* Waxay hubisaa in dukumiintiyada rarka ay sii ahaanayaan difaac buuxa.
* Adkaysiga ilmada adag, ma fududa in wax la kaydiyo, laga hortago luminta.
* Baqshadaha xasaasiga ah ee cadaadiska ayaa sugaya oo ilaalinaya dukumiintiyada ku xiran dibadda rarka
* Habee macluumaadka la daabacay ee ay codsadeen macaamiisha.
* Taakuleynta dhalaalka kulul ee dhalaalka waxay siisaa adhesion xoog leh meelaha kala duwan sida waraaqaha, caagagga, badeecadaha jiingado, iwm
* Baqshadaha liistada baqshaduhu waxay ilaalinayaan xisaabaadka alaabta lagu geeyay ee ka kooban alaabada la soo raray si ay mas'uuliyiintu u waafajiyaan culeyska xirmooyinka macaamiishana ay u eegaan in waxyaabaha ku jira ay la mid yihiin soosaarista.
Faa'iidooyinka Baakadaha baqshada liisaska:
* Ilaalin iyo badbaado aad u fiican
Liistada Baakadaha baqshadaha ayaa xafidaya waraaqaha lana xafidaa marka la marayo.
* Cimilo adkaysi
Waraaqda waara waxay si wada jir ah u ilaalisaa dukumiintiyada muhiimka ah lagana ilaaliyaa wasakhda, qoyaanka iyo cunsurrada.
Codso sanduuqyada, baqshadaha, boorsooyinka boostada lagu soo diro, tuubooyinka, iyo wixii intaa ka badan! Isku-xidhka joogtada ah ee joogtada ah isla markiiba isla noocyo kala duwan oo substrates ah; si fudud fowdada ka bixi oo cadaadis saar.
* R&D adag oo leh shatiyado u gaar ah.
* REACH iyo ISO shahaado.
* Dhexgalka Vertical ee wax soo saarka: filinka filimka, daaha silica, soosaarka kuleylka dhalaalaya kululeeyaha iyo dahaadhka, daabacaadda, dhimista jarista the dhammaan howlaha waxaa lagu dhammeeyaa aqoon isweydaarsiyo u gaar ah.
* In ka badan 20 sano warshadaha daahan.
Xiga: Waraaqda xumbada